रमेश प्रसाईंको बिहेमा , इन्द्रेणी टीम बाजा गाजा सहित रमेशको घरमा…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित) – yuwa Awaj
मंग्सिर २३, २०७७ मंगलबार 1
पछिल्लो समय ‘रिंके’बुङको राँगो’को गीतका कारणले चर्चामा रहेका गायक रमेश प्रसाई विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । उनले कालीकोटकी समाजसेवी नन्दा सिंहसँग विवाह गर्न लागेका हुन् ।
३ वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई रमेश र नन्दाले बिवाहमा परिणत गर्न लागेका हुन् । रमेशसँग आफ्नो विवाह हुन ला’गेको न’न्दाले ब’ताएकी छन् । यहि २२ गते धरानमा नेपाली परम्पराअनुसार थोरै ब्यक्तिको उपस्थितिमा विवाह कार्यक्रम रहेको न’न्दाले जा’नकारी दि’इन् ।
राजनीतिक टिप्पणी गर्न पनि माहिर रमेश र कल्पना दाहालबीच केही अगाडि प्रेमको चर्चा मिडि’यामा चलेको थि’यो ।एक लो’कदोहोरी कार्यक्रममा सँगै दोहोरी गाएपछि रमेश र कल्पनाको नाम जोडिएको थियो ।
रमेश पछिल्लो स’मय लो’क दो’होरी कार्य’क्रम इन्द्रेणीमा समेत आब’द्ध छन् भने नन्दाले काठमाडौंमा बालआश्रम चलाइरहेकी छन्।अबल वक्तृत्व क्षमताका कारण फलोअर्स कमाएका रमेशलाई पछिल्लो समय ‘रिंकेबुङको राँगो’ बोलको गीतले च”र्चामा ल्याएको छ ।
उनी पछिल्लो समय इन्द्रेणीमा समेत आवद्ध छन् । इन्द्रेणिमा दोहोरी गाउँदा गायक कल्पना दाहलसँग वि’वाह गर्ने कु’रा गित’मा समेटिएपनि गितमै सिमित हुने भ’एको छ ।नन्दाले काठमाडौंमा बालआश्रम चलाइरहेकी छन् ।
नन्दा र रमेशविच ३ बर्षदेखि ग’हिरो प्रे\_म सम्बन्ध रहेको छ । ३ बर्ष अगाडि नन्दालाई रमेशले प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । ३ बर्ष अगाडि इन्द्रेणी कार्यक्रममा भेट भए’पछि उनी’हरु नजिक भएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुको विवाह मंसिर २२ गते धरानबाट हुने भएको छ ।को हुन् नन्दा सिंह ?
नन्दा सिंह कर्णालीको कालिकोटमा जन्मिएकी हुन् ।
उनको बाल्यकाल पनि कालिकोटमा नै बित्यो’ ।नेपालगन्जको दृष्टिवि’हीनलाई प’ढाउने हो’स्टेलमा बसेर पढेकी नन्दाले त्यहीबाट एसएलसी उति’र्ण गरिन् । एसएलसी सकेर उनी काठमाडौँ आइन् । स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी नन्दा अहिले सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन् ।
अ’न्तर दृष्टि नेपाल नामक संस्था मार्फत तीन वर्ष देखि १२ जना अनाथ बालबालिकाकी आमा बनेकी छन् ।नन्दाको सामाजिक काममा मात्रै होइन साहित्यमा पनि रुचि छ ।
कविता, गजल लेख्न निक्कै रुचि राख्ने नन्दा गीत पनि गाउछिन ।
नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगितामा श्रीलङ्का पुगेर समेत जितेकी उनी आँखा देख्दिनन् तर क्रिकेटमा अब्बल छन् । बिहान बेलुका आफै खाना पकाउँछिन् । लु’गा धुन्छिन्, भाँडा माझ्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको रुचि छ ।यसरी भयो रमेश प्रसाई को साथी जीवनको वि’वाह ध रानमा भोली हुने भ’नियको बिहे आज केटी पक्ष र भोलि म’ण्रडपबाट गरिने रमे’शले बतायका छन्।
Prevश्वेता खड्का भन्नुहुन्छ : एक्लै जीवन काट्न सकिँदैन रहेछ, के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्विकार गर्ला ?
Nextहेमराज थापा भन्नुहुन्छ : पारस शहालाई देशको प्रमुख बनाउने वा कुलमान घिसिङ र रबि लामिछानेलाई ? चित्तबुझे सेयर गर्नुहोस् ।